“Chelsea waxay raadineysaa inay ku guuleysato Premier League iyo Champions League” – Christian Pulisic – Gool FM
Owen oo sheegay in xiddig ka tirsan Liverpool ay saameyn weyn ku yeelan doonto maqnaanshiyaha Van Dijk
Luka Modric: “Bandhigga Real Madrid uma qalmin Champions League”
“Chelsea waxay raadineysaa inay ku guuleysato Premier League iyo Champions League” – Christian Pulisic
Dajiye October 12, 2020
(London) 12 Okt 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Chelsea ee Christian Pulisic ayaa xaqiijiyay in Blues ay hiigsaneyso ku guuleysiga horyaalka Premier League iyo tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.
Hadalka Christian Pulisic ayaa yimid kadib markii ay maamulka Blues kala soo saxiixdeen siiqii dhawaa ee xagaaga xiddigaha kala ah Edouard Mendy, Thiago Silva, Kai Havertz, Timo Werner iyo Hakim Ziyech.
Sida uu daabacay wargeyska “The Sun” ee dalka England Christian Pulisic ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Chelsea waa koox taariikh weyn leh, waa koox dooneysa inay u tartanto sidii ay ugu guuleysan laheyd koobab”.
“Hadafkeenu waa inaan ku dhameysano booska ugu sarreya ee horyaalka Premier League, iyo inaan ku guuleysano tartan kasta oo la heli karo, oo uu ku jiro Champions League”.
“Waxaan heysanaa koox ciyaartoy aad u fiican, waana tartami doonnaa, waxaana baahi u qabnaa inaan ku guuleysano koobab”.
“Tani waa waxa aan dooneyno inaan ku guuleysano waana mid macquul ah, si adag ayaan ugu dagaalami doonaa inaan helno koobabkan”.
Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha Chelsea ayaa rajeynaya in xilli ciyaareedkaan uu u noqon doono mid dhameystira dadaalka maamulka ee xagaagan, waxaana taageerayaasha qudhooda ay rajo ka qabaan suurtogalnimada ah inay dib u hantaan horyaalka Premier League, sidoo kalena ay si xoogan ugu tartamaan koobka Champions League.
Wareysi uu bixiyay Josep Maria Bartomeu oo ka carreysiiyay taageerayaasha kooxda Barcelona
Juventus oo qorsheeneysa inay ku garaacdo Real Madrid iyo Barcelona saxiixa xiddig si weyn loo wada doonayo